Global Voices teny Malagasy » Niverina Ety Anaty Aterineto Ary Mihaza Mpianatra Ny Tafika Menan’i Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Niverina Ety Anaty Aterineto Ary Mihaza Mpianatra Ny Tafika Menan'i Shina
Voadika ny 15 Avrily 2013 9:52 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora
Nidera ny Anjerimanontolo Guangdong Baiyun ny governemanta eo an-toerana any amin'ny faritanin'i Guangdong Atsimon'i Shina, noho ny ‘asa tsara nataony’ mikasika ny fanaraha-maso ny hetsika sy ny fomba fihevitry ny mpianatra et anaty aterineto, araka ny tatitry ny Nandu Daily  [zh].
Nomena ny anaram-bositra hoe “tafika menan'ny aterineto” ary tarihan'ny mpampianatra sivy sy mpianatra enina, nitsangana tamin'ny taona 2010 ny ekipan'ny “Fanarahamaso Ny Aterineto sy ny Haino aman-jerim-bahoaka ary ny Vaovaon'ny Mpianatra ” ao amin'ny Anjerimanontolo Guangdong Baiyun mba hijery ny resaky ny mpianatra ary hanara-maso ny fihetseham-po miiba ety anaty aterineto. Takian'ny asan'izy ireo isanandro ny fanaraha-maso ny resaka anaty sehatra fifanakalozan-dresaka, ny fanarahana ireo fitorahana bilaogy kiritika ary ny fitsongoana dia ireo seha-pifaneraserana anaty aterineto. Miasa 1.5 ora isan'andro ny mpianatra nokaramaina ary mandray RMB 200 ($32) isam-bolana.
Aterineto ao Shina, avy amin'i Karen Roach , tao amin'ny Shutterstock 
Niteraka hatezerana avy hatrany tety anaty aterineto ilay vaovao vantany vao nivoaka; maro no mihevitra fa nandika ny fiarovana ny fiainana manokan'ny mpianatra ny anjerimanontolo ary mitaky ny hanajanonana avy hatrany ilay rafitra. Na izany aza, maro ireo fanehoankevitra tao amin'ilay tranonkalan'ny Weibo, fitoraham-bilaogy kiritika Shinoa, no nofafàna ary nanjary lasa teny fady vetivety teo ny “Tafika Menan'ny Aterineto”. Namoaka ity fanehoankevitra [zh] ity ny Sina news tamin'ny 20 Martsa:
Raha eo anatrehan'ny lalàna, tsy manana zo hanara-maso ny mombamomba ny mpianatra (olom-pirenena) ety anaty aterineto ny anjerimanontolo. Na inona na inona antony mety holazainy, mifanohitra amin'ny lalàna izao zavatra izao. Manana zo hanenjika ny anjerimanontolo ny mpianatra. Kanefa, ny tena mampalehelo sy mampanahy amin'izao zavatra izao dia tsy vitan'ny hoe tsy ho voatohintohina amin'izao fitondrantenany izao ny Anjerimanontolo Baiyun, fa koa mbola voafidy ho ohatra mahomby amin'ny “Tetikasa Fitantanana ny Raharahan'ireo Mpianatra eny amin'ny Sampam-pampianarana ambony” ilay rafitra fanaraha-maso eny anivon'ny aterineto ” Tafika Mena Baiyun – sady nankalazaina sy nohindrahindrain'ny Komitin'ny Raharahan'ireo Mpianatra eny amin'ny Sampam-pampianarana ambony any Guangdong izy.
Nanakiana [zh] teo amin'ny Sina Weibo[zh] ilay mpisolovava, Song Jian:
Mifanohitra amin'ny natioran'ny olombelona ny fifehezana ny fisaina. Tsy misy ilàna azy izay rehetra rafi-pampianarana ambony miezaka ny hanao ireo mpianany ho andevony ara-tsaina.
Nitaky tamin'ny Anjerimanontolo Bai Yu i “止于至善_风飘絮 ” ny mpianatra iray avy amin'ny fianarana ambony avy any Guangdong, mba hanome ny fototra araka ny lalàna sy vola mamatsy ity rafitra ity:
[Fitanisàna avy amin'ilay mpanoratra Taioanezy] Long Yingtai: Itsahina aby ny zo n'aiza n'aiza. Zavatra tokony hiadian'ny tsirairay ny fahalalahana hiteny ary tsy hatao sorona mihitsy na rahoviana na rahoviana, na aiza na aiza. Aoka haseho ho fanta-bahoaka ny fototra araka ny lalàna sy vola mamatsy ny tafika menan'ny aterineto.
Nanoratra  [zh] i “薛蛮子” , olona iray ao amin'ny aterineto hoe: hita tao amin'ny fianarana ambony Baiyun ve ny “1984”?, ohariny amin'ny Das Leben der Anderen , horonantsary alemana mikasika ny fitantanana tany Berlin Atsinanana tamin'ny 1984 nataon'ny mpiasan'ny polisy miafina Stasi.
Manaramaso ny fitoraham-bilaogy madinika, ny sehatra fifampiresahana ety amin'ny aterineto, ary ny vondrona QQ, an'ireo mpianatra ny “Tafika Menan'ny Aterineto” mampitahotra. Inona no atahoran'ny fitantanan'ny Anjerimanontolo Baiyun? Iza no hiaro ny fiainana manokan'ny mpianatra? Ao ambadiky ny rafitra fanarahamaso, ho sazian'izy ireo ve izany ireo mpianatra mitaraina? Raha manaràma mpianatra manana ny fironana politika ifikirany mba hijery ireo namany mpiray kilasy aminy, hatraiza izany no mampiavaka antsika amin'ny Das Leben der Anderen?
Naverin'ny Anjerimanontolo Baiyun navoaka [zh] ny lahatsoratra avy amin'ny Legal Daily tamin'ny 20 Martsa, mitondra ny lohateny hoe “Hanadiovana ny aterineto, mila ny Tafika Menan'ny aterineto isika” ho valin'ny hatezerana tamin'ny aterineto. Mamintina izy hoe:
Nanao fandraisana anjara misongadina teo amin'ny fananganana sivilizasiona ara-tsaina sosialista ny “Tafika Menan'ny Aterineto'” ao amin'ny Fianarana ambony Baiyun. Tsy tokony hàka tàhaka azy ireo ve ny sekoly na ny orinasa na ny fikambanana hafa??
Toa mbola hiraikitra ela eto izany ny tafika mena raha zohina koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/15/47244/
 Nandu Daily: http://news.sina.com.cn/o/2013-03-20/003826580333.shtml?bsh_bid=207735008
 Das Leben der Anderen: http://www.imdb.com/title/tt0405094/